Boriborintany Faha-6 Niavaka ny fanamarihana ny Noely
Fankalazana ny Halloween Handefa ny horonan-tsary HANTÉS ny Canal Plus
Hankalazaina ny sabotsy 31 oktobra ho avy izao ny fetin’ny halloween. Tsy ho diso anjara amin’ny fanamarihana izany ny Canal Plus Madagascar hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa.
Festival des jardins 2 Higohana ny hakanton’ny voninkazo
Nosokafana tamim-pomba ôfisialy omaly etsy amin’ny Alliance Française Andavamamba ilay hetsika “Festival des jardins” andiany faharoa karakarain’izy ireo, hifarana amin’ny Sabotsy.
Gothlieb ao amin’ny Trano bongo “Haverina ny volan’izay tsy miomehy…”
Anio hariva amin’ny 7 ora no fotoana hiarahana amin’i Gothlieb etsy amin’ny Trano bongo Tanjombato ao anatin’ny hetsika Feo d’artifices tour.
Ambatomainty Ambatondrazaka Nirava maina ny seho Bolo Pix sy Jean Aimé ary Mijah
Fatiantoka tsy roa aman-tany ny an’ny mpikarakara fampisehoana, nikasa hampiakatra an-tsehatra an’i Bolo Pix sy Jean Aimé tao Ambatomainty andaniny sy ankilany i Jean Aimé sy Mijah tao Manakambahiny.
Fiarahan’ny mitovy fananahana Ilaina ny fanabeazana ara-bakoka sy kolontsaina
Ny fanehoan-kevitry ny Papa François momba ny fiarahan’ireo mitovy fananahana , hoy ny mpahaiolona izay misahana indrindra ny ara-kolontsaina na “anthropologie culturelle”, Eddy Jean Philippe,
Mpanakanto nivoy « Kaiamba » Nananganana tsangambato i Dede Fenerive sy Jean Fredy
Notanterahina tao Fenoarivo Atsinanana ny sabotsy teo ny lanonana fanomezam-boninahitra an'ireo mpanakanto mpanao kaiamba sy fanokanana ny tsangambaton'i Dede Fenerive sy Jean Fredy. Mpanakanto nivoy ny « Kaiamba »,
Niavaka ny fanamarihana ny Noely ho an'ny boriborintany faha-6 Antananarivo Renivohitra omaly alarobia 20 desambra teny amin'ny foibeny Ambohimanarina izay natrehan'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ny mpiara-miasa aminy notronin'ireo mpiasa eo anivon'ny boriborintany faha-6 notarihan'ny delege eny an-toerana.
Fotoam-pivavahana no nanokafana ny lanonana izay niarahan'ireo vondrom-pivavahana Kristianina eny an-toerana nifarimbona. Nivoitra tao fa mitondra hafaliana ny Krismasy ary nanome modely ho an'ny zanak'olombelona Andriamanitra dia ny fanetren-tena. Ny ben'ny tanànan'Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana manokana dia niarahaba ny boriborintany faha-6 noho ny fetin'ny Krismasy sady nirary sahady ny hahatrarana ny taona vaovao 2018. Tsy nody tanam-polo nody ireo vahoakan'Ambohimanarina marobe nanatrika ny fotoana fa nizarana fanomezana toy ny vary, menaka , vatomamy. Ankoatra izay dia nitondra fanentanana ireo avy amin'ny fikambanana miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizy vavy. Nohamafisina fa tsy misy olana tsy voavahan'ny fifampiresahana satria raha herisetra valiana herisetra dia olana vaovao no vokany.